Horudhaca kulanka caawa ee Premier League kooxaha Chelsea iyo Liverpool – Gool FM
Byare September 16, 2016
(London) 16 Sebt 2016 – David Luiz ayaa caawa kulankiisii ugu horeeyay ku soo bilaawan kara safka hore ee Chelsea kaddib tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay oo uu 34 Milyan oo gini kaga yimid kooxda Paris Saint-Germain.
Waxaa uu badali doonaa booska John Terry, oo dhaawac uu ka soo gaaray kulankii Swansea City.
Dhanka Liverpool Dejan Lovren ayaa la filayaa inuu dib ugu soo laabto kulankan maadaama uu seegay kulankii 4-1 ay ugu adkaatay Reds kooxda Leicester City.
Philippe Coutinho ayaa isagana dib loogu yeeri doonaa maadaama loo nasasiiyay kaddib safar dheer oo Brazil uu ugu maqnaa ciyaaraha isreeb reebka koobka Adduunka.
Garoonka: Stamford Bridge, London
Garsooraha: M. Atkinson
Saacadda: 10:00 habeenimo xilliga Muqdisho
Taariikhda: 16 September 2016
>- Chelsea ayaa ka badisay Liverpool labo jeer sagaalkii kulan u dambeeyay oo ay horyaalka kula ciyaartay garoonkeeda Stamford Bridge, waxaa laga badiyay afar, saddexna barbaro.
>- Kani waa kulankii 175-aad ee tartan rasmi ah oo dhexmara kooxahan, Liverpool ayaa ku hoggaamineysa 75 guul oo ay ka gaartay Chelsea, halka Blues ay badisay 61, waxaana barbaro galeen 38 jeer.
>- Chelsea ayaa eegeysa in saddex kulan xiriir ah ay ku gaarto guul garoonkeeda horyaalka Premier league markii ugu horreysay tan iyo bishii May sanadkii hore.
>- Blues ayaa ugu yaraan dhalineysay labo gool, mid kasta oo ka mid ah afarteedii kulan ugu horreeyay horyaalka.
>- Diego Costa ayaa durba dhaliyay xagaagan afar gool, xagaagii hore waxa ay ku qaadatay in afartiisii gool ugu horreeyay ilaa kulumada Boxing Day-ga ee la ciyaaro dabayaaqada bisha ugu dambeysa ee sanadka.
>- Antonio Conte ayaa guul gaaray 21-kiisii kulan ugu dambeeyay horyaalka uu ku ciyaaray garoonka kooxdiisa isagoo macalin ah, loogama badin garoonka kooxdiisa tan iyo 2013 markaas oo Sampdoria ay ka adkaatay Juventus oo isaga macalin uu u ahaa.
>- Reds ayaa ah kooxda dhalisay goolasha ugu badan Premier league sanadkan 2016, waana 50 gool.
>- Chelsea ayeysan dhicin in habeenka Jimcaha Premier league ay guuldarro kasoo gaarto tan iyo 2003, markaasna waxaa ka badisay kooxda Charlton Athletic oo ugu adkaatay 4-2.
>- Liverpool ayaa iyana rikoor fiican ka haysata kulummada Jimcaha Premier league oo lagama badin tan iyo 2004, markaasna Arsenal ayaa ka badisay.
Neymar oo ka hadlay wadahadaladii uu la yeeshay kooxda PSG (Muxuu yiri?)